သင့်အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပါးနီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty သင့်အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပါးနီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
သင့်အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပါးနီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
အလှကုန်စတိုးဆိုင်တွေကနေ(blusher) ပါးနီလို အလှကုန်တွေ ၀ယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရောင်အနေအထားနဲ့ အိမ်ရောက်လို့ လိမ်းကြည့်တဲ့အခါ အရောင်ကတခြားစီဖြစ်နေတာကို ပျိုမေတို့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် စမ်းလိမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ အလှကုန်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ၀ယ်ပေမယ့် ပျိုမေတို့အသားအရေနဲ့ အမှန်တကယ် ကိုက်ညီတဲံ ပါးနီကို ရွေးချယ်ရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ပျိုမေတို့ Blusher (ပါးနီ)ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မဝယ်ခင်မှာ ပျိုမေတို့ရဲ့အသားအရေအရောင်ကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်နော်။ ဒါ့ကြောင့် ပျိုမေတို့အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပါးနီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်လို့ရမလဲဆိုတာကို လမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယေဘုယျအားဖြင့် cool, warm နဲ့ neutral ဆိုပြီး အသားအရောင်ရဲ့ undertone သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပျိုမေတို့အသားရေရဲ့ ဒီအမျိုးအစားတွေကို သိထားခြင်းက ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပါးနီ၊ အောက်ခံမိတ်ကပ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းနီကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပျိုမေတို့အသားအရောင်ရဲ့ undertone ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
၁။ လက်ကောက်ဝတ် သွေးပြန်ကြောအရောင်
သင့်အရေပြားရဲ့ undertone ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုက သင့်လက်ကောက်ဝတ် အတွင်းပိုင်းက သွေးပြန်ကြောရဲ့အရောင်ကို ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဧရိယာပေါ်ကအရေပြားဟာ ပါးလွှာပြီး သွေးကြောကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်သွေးကြောအရောင်က အပြာ သို့ ခရမ်းပြာရောင်ဖြစ်လျှင် သင့်အသားရောင်က cool tone ပါ။ သင့်သွေးကြောအရောင်က အစိမ်း သို့မဟုတ် စိမ်းပြာရောင်ဆိုရင် သင့်မှာ warm tone ရှိပါတယ်။ သွေးကြောအပြာနဲ့ အစိမ်းရောယှက်နေရင်ရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုခွဲခြားလို့မရနိုင်ရင် သင့်မှာ neutral tone ရှိပါတယ်။
၂။ ရွေနှင့် ငွေလက်ဝတ်ရတနာ
သင်အသားရောင်က cool toned ဖြစ်လျှင် ရွှေဖြူနဲ့ ပလက်တီနမ်ကဲ့သို့ ငွေလက်ဝတ်ရတနာက သင့်အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်ပါတယ်။ သင့်အသားရောင်က warm toned ဖြစ်လျှင် ရွေ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါကဲ့သို့ ရွှေလက်ဝတ်ရတနာက သင့်အသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်ပါတယ်။သင့်အသားရောင်က neutral toned ဖြစ်လျှင် ဘယ်လက်ဝတ်ရတနာဝတ်ဝတ် သင့်အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဆွဲကြိုး သို့ လက်ကောက်တစ်ကွင်းနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။
၃။ အဖြူရောင်စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
သင့်ရဲ့ undertone ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းက အဖြူရောင်စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ သင့်အသားအရေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်အဖြူပြောင်ကို သင့်မျက်နှာဘေးမှာ ကပ်ကြည့်ပါ။ သင့်မျက်နှာက ပန်းရောင်ပေါက်နေရင် သင့်အသားအရောင်က cool tone ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မျက်နှာက ညိုဝါရောင်သန်းနေရင် သင်က warm tone ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မျက်နှာက မီးခိုးရောင်၊ ဖြူရော်ရော်အရောင်ဆိုရင် သင်က neutral tone ပိုင်ရှင်ပါ။
စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်တွေဘာတွေ မလိမ်းဘဲ သဘာဝအလင်းရောင်နဲ့သာ စမ်းသပ်ပါ။
မှန်ကန်တဲ့ ကာလာကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ?
ဘယ်အသားအရေဆိုရင် ဘယ်နံပါတ်သုံးရမယ်ဆိုပြီး မိတ်ကပ်အလှကုန်တွေမှာ ညွှန်းကြပေမယ့် အားလုံးက သင်နဲ့ ကိုက်ညီချင်မှ ကိုက်ညီမှာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ သင့်အသားအရေအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တာ တစ်ခုခုကို လိုချင်ရင် သင့်ပါးလေးတွေကို သဘာဝအတိုင်း ရှက်သွေးဖြန်းနေတဲ့ radiant look လေးပြုလုပ်ပါ။
သင့်အသားအရေက ဖြူတယ်ဆိုရင် ပါးနီကို သဘာဝဆန်တဲ့ ပန်းနုရောင်၊ မက်မွန်ရောင်လေးတွေ ရွေးချယ်ပေးပါ။ ဝိုင်ရောင် သို့မဟုတ် ကြေးဝါရောင်လို အရောင်ရင့်တွေက သင့်အသားအရေကိုနဲ့ မလိုက်ဖက်သလို သဘာဝမဆန်တဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။
သင်ဟာ cool undertone ဖြစ်လျှင် ပန်းရောင်၊ ဝါဖျော့ဖျော့လိမ္မော်ရောင် ပါးနီက သင့်အသားအရောင်ကို ပန်းနုရောင်ဟပ်နေပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ warm undertone ဖြစ်လျှင် မက်မွန်ရောင်ပါးနီက သင့်အသားအရောင်အလုံးစုံကို တောက်ပနေစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ အသားလတ်တဲ့သူဖြစ်လျှင် coral (သန္တာရောင်) ဒါမှမဟုတ် ခရမ်းဘက်နည်းနည်းရောက်တဲ့ mauveအရောင်တွေက သင့်အသားအရေကို ရွန်းစိုတောက်ပမှု ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ cool undertone ဖြစ်လျှင် mauve သို့ sheer plum colour ကိုရွေးချယ်ခြင်းက သင့်ပါးမို့လေးတွေကို မြင်သူတကာ ငေးနေစေမှာပါ။
သင်မှာ Warm undertone ရှိပါက သန္တာရောင် ၊မက်မွန်ရင့်ရောင်၊ ဝိုင်ရောင်တို့ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဖယောင်းတိုင်အလင်းရောင်လို သင့်ပါးမို့လေးတောက်ပနေမှာပါ။
အသားညိုတဲ့သူတွေကတော့ အရောင်တောက်တောက်လေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ပန်းရင့်ရောင် သို့မဟုတ် ကြေးဝါရောင်(bronze )ပါးနီက သင့်ရဲ့ပါးလေးတွေကို ထွန်းလင်းတောက်ပနေစေမှာပါ။
သင့်မှာ cool undertone ရှိပါက ပန်းဆီရောင်၊ plum ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ရီသီးရောင်က သင့်ကိုခေတ်ဆန်ဆန် Look လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
သင့်မှာ warm undertone ရှိပါက စပျစ်သီးခြောက်ရောင်၊ ကြေးဝါရောင် ဒါမှမဟုတ် အုတ်ကျိုးရောင်လေးကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်မျက်နှာကျပေါ်မှုတည်ပြီး ပါးနီကို ဘယ်လိုလိမ်းမလဲ?
circular motion အတိုင်း သင့်ပါးမို့လေးတွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ အနားစွန်းလေးတွေ blend ဖြစ်ဖို့ သင့်ရဲ့ဘရပ်ကို နားဘက်ကို ဦးတည်ပြီး တချက်လောက် ဆွဲပေးလိုက်ပါ။
ဒိုင်းမွန်း ဒါမှမဟုတ် အသည်းပုံမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေဟာ ပါးရိုးတွေကို highlighting လုပ်ပေးခြင်းက မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို ပိုပြီးထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပါးရိုးလေးအတိုင်း အထက်အောက် C ပုံသဏ္ဍာန် ခြယ်သပေးပါ။
မျက်နှာဝိုင်းတဲ့သူတွေဟာ မျက်နှာလေးကို slimming ဖြစ်ပြီး သဘာဝပိုဆန်တဲ့ Look လေးခြယ်သပေးရပါမယ်။ ပါးနီကို ပါးရိုးထိပ်ကနေ သဘာဝအကွေးအတိုင်းလိုက်ပြီး ပါးရိုးအောက်သို့ ဆွဲပေးရပါမယ်။ သင့်ရဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို ပိုပြီးပေါ်လွင်စေဖို့ hairline နဲ့ နဖူးကို အရောင်လေးတွေ ထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက သင့်မျက်နှာလေးကို သွယ်လျစေပါလိမ့်မယ်။
ပါးနီမှာ ပေါင်ဒါ၊ ခရမ်၊ ဂျယ်လ်၊ stain ဆိုပြီး အမျိုးအစား ၄မျိုးရှိပါတယ်။ ပါးနီအမှုန့်(ပေါင်ဒါ)က အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေအတွက် သင့်တော်ပြီး ခရမ်ပုံစံပါးနီကတော့ အသားအရေခြောက်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ကိုရီးယားမလေးတွေလို ရွန်းစိုတောက်ပတဲ့ ပါးမို့လေးဖြစ်ချင်ရင်တော့ hydrating formula နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂျယ်လ်ပုံစံပါးနီလေးက သင့်တော်ပါတယ်။ စုပ်တံနဲ့ stainပုံစံပါးနီကတော့ ပါးပေါ်မှာ အစက်လေးချပြီး လက်ချောင်းလေးနဲ့ ညှိပေးရမှာပါ။
သငျ့အသားအရောငျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ပါးနီကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ?
အလှကုနျစတိုးဆိုငျတှကေနေ(blusher) ပါးနီလို အလှကုနျတှေ ၀ယျတဲ့အခါမှာ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အရောငျအနအေထားနဲ့ အိမျရောကျလို့ လိမျးကွညျ့တဲ့အခါ အရောငျကတခွားစီဖွဈနတောကို ပြိုမတေို့ ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒါမှမဟုတျ စမျးလိမျးကွညျ့လို့ရတဲ့ အလှကုနျဆိုငျကွီးတှမှော ၀ယျပမေယျ့ ပြိုမတေို့အသားအရနေဲ့ အမှနျတကယျ ကိုကျညီတဲံ ပါးနီကို ရှေးခယျြရာမှာ အခကျအခဲဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ဒီတော့ပြိုမတေို့ Blusher (ပါးနီ)ဝယျတော့မယျဆိုရငျ မဝယျခငျမှာ ပြိုမတေို့ရဲ့အသားအရအေရောငျကို သိထားဖို့ အရေးကွီးပါတယျနျော။ ဒါ့ကွောငျ့ ပြိုမတေို့အသားအရောငျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ပါးနီကို ဘယျလိုရှေးခယျြလို့ရမလဲဆိုတာကို လမျးညှနျပေးလိုကျပါတယျနျော။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ cool, warm နဲ့ neutral ဆိုပွီး အသားအရောငျရဲ့ undertone သုံးမြိုးရှိပါတယျ။ ပြိုမတေို့အသားရရေဲ့ ဒီအမြိုးအစားတှကေို သိထားခွငျးက ကိုယျ့အသားအရနေဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ပါးနီ၊ အောကျခံမိတျကပျနဲ့ နှုတျခမျးနီကို ရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ အသုံးဝငျပါတယျ။ ပြိုမတေို့အသားအရောငျရဲ့ undertone ကို ဆုံးဖွတျဖို့ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ နညျးလမျးအနညျးငယျရှိပါတယျ။
၁။ လကျကောကျဝတျ သှေးပွနျကွောအရောငျ
သငျ့အရပွေားရဲ့ undertone ကို ဆုံးဖွတျဖို့ အမွနျဆုံးနညျးလမျးတဈခုက သငျ့လကျကောကျဝတျ အတှငျးပိုငျးက သှေးပွနျကွောရဲ့အရောငျကို ကွညျ့ဖို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဧရိယာပျေါကအရပွေားဟာ ပါးလှာပွီး သှေးကွောကို အလှယျတကူမွငျနိုငျလို့ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့သှေးကွောအရောငျက အပွာ သို့ ခရမျးပွာရောငျဖွဈလြှငျ သငျ့အသားရောငျက cool tone ပါ။ သငျ့သှေးကွောအရောငျက အစိမျး သို့မဟုတျ စိမျးပွာရောငျဆိုရငျ သငျ့မှာ warm tone ရှိပါတယျ။ သှေးကွောအပွာနဲ့ အစိမျးရောယှကျနရေငျရငျ ဒါမှမဟုတျ တဈခုခုခှဲခွားလို့မရနိုငျရငျ သငျ့မှာ neutral tone ရှိပါတယျ။
၂။ ရှနှေငျ့ ငှလေကျဝတျရတနာ
သငျအသားရောငျက cool toned ဖွဈလြှငျ ရှဖွေူနဲ့ ပလကျတီနမျကဲ့သို့ ငှလေကျဝတျရတနာက သငျ့အသားအရနှေငျ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ သငျ့အသားရောငျက warm toned ဖွဈလြှငျ ရှေ၊ ကွေးနီ၊ ကွေးဝါကဲ့သို့ ရှလေကျဝတျရတနာက သငျ့အသားအရနှေငျ့ လိုကျဖကျပါတယျ။သငျ့အသားရောငျက neutral toned ဖွဈလြှငျ ဘယျလကျဝတျရတနာဝတျဝတျ သငျ့အသားအရနေဲ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ ဆှဲကွိုး သို့ လကျကောကျတဈကှငျးနဲ့ စမျးကွညျ့ပါ။
၃။ အဖွူရောငျစာရှကျတဈရှကျနဲ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့ပါ
သငျ့ရဲ့ undertone ကို ဆုံးဖွတျဖို့ နောကျထပျနညျးလမျးက အဖွူရောငျစာရှကျတဈရှကျနဲ့ သငျ့အသားအရကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ဖို့ ဖွဈပါတယျ။ စာရှကျအဖွူပွောငျကို သငျ့မကျြနှာဘေးမှာ ကပျကွညျ့ပါ။ သငျ့မကျြနှာက ပနျးရောငျပေါကျနရေငျ သငျ့အသားအရောငျက cool tone ဖွဈပါတယျ။ သငျ့မကျြနှာက ညိုဝါရောငျသနျးနရေငျ သငျက warm tone ပိုငျရှငျဖွဈပါတယျ။ သငျ့မကျြနှာက မီးခိုးရောငျ၊ ဖွူရျောရျောအရောငျဆိုရငျ သငျက neutral tone ပိုငျရှငျပါ။
စမျးသပျတဲ့အခါမှာ မိတျကပျတှဘောတှေ မလိမျးဘဲ သဘာဝအလငျးရောငျနဲ့သာ စမျးသပျပါ။
မှနျကနျတဲ့ ကာလာကို ဘယျလိုရှေးမလဲ?
ဘယျအသားအရဆေိုရငျ ဘယျနံပါတျသုံးရမယျဆိုပွီး မိတျကပျအလှကုနျတှမှော ညှနျးကွပမေယျ့ အားလုံးက သငျနဲ့ ကိုကျညီခငျြမှ ကိုကျညီမှာပါ။ အကောငျးဆုံးကတော့ သငျ့အသားအရအေရောငျနဲ့ လိုကျဖကျတာ တဈခုခုကို လိုခငျြရငျ သငျ့ပါးလေးတှကေို သဘာဝအတိုငျး ရှကျသှေးဖွနျးနတေဲ့ radiant look လေးပွုလုပျပါ။
သငျ့အသားအရကေ ဖွူတယျဆိုရငျ ပါးနီကို သဘာဝဆနျတဲ့ ပနျးနုရောငျ၊ မကျမှနျရောငျလေးတှေ ရှေးခယျြပေးပါ။ ဝိုငျရောငျ သို့မဟုတျ ကွေးဝါရောငျလို အရောငျရငျ့တှကေ သငျ့အသားအရကေိုနဲ့ မလိုကျဖကျသလို သဘာဝမဆနျတဲ့ပုံပေါကျစပေါတယျ။
သငျဟာ cool undertone ဖွဈလြှငျ ပနျးရောငျ၊ ဝါဖြော့ဖြော့လိမ်မျောရောငျ ပါးနီက သငျ့အသားအရောငျကို ပနျးနုရောငျဟပျနပေါလိမျ့မယျ။
သငျဟာ warm undertone ဖွဈလြှငျ မကျမှနျရောငျပါးနီက သငျ့အသားအရောငျအလုံးစုံကို တောကျပနစေဖေို့ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
သငျဟာ အသားလတျတဲ့သူဖွဈလြှငျ coral (သန်တာရောငျ) ဒါမှမဟုတျ ခရမျးဘကျနညျးနညျးရောကျတဲ့ mauveအရောငျတှကေ သငျ့အသားအရကေို ရှနျးစိုတောကျပမှု ပေးပါလိမျ့မယျ။
သငျဟာ cool undertone ဖွဈလြှငျ mauve သို့ sheer plum colour ကိုရှေးခယျြခွငျးက သငျ့ပါးမို့လေးတှကေို မွငျသူတကာ ငေးနစေမှောပါ။
သငျမှာ Warm undertone ရှိပါက သန်တာရောငျ ၊မကျမှနျရငျ့ရောငျ၊ ဝျိုငျရောငျတို့ကို ရှေးခယျြပါ။ ဖယောငျးတိုငျအလငျးရောငျလို သငျ့ပါးမို့လေးတောကျပနမှောပါ။
အသားညိုတဲ့သူတှကေတော့ အရောငျတောကျတောကျလေးတှနေဲ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ ပနျးရငျ့ရောငျ သို့မဟုတျ ကွေးဝါရောငျ(bronze )ပါးနီက သငျ့ရဲ့ပါးလေးတှကေို ထှနျးလငျးတောကျပနစေမှောပါ။
သငျ့မှာ cool undertone ရှိပါက ပနျးဆီရောငျ၊ plum ဒါမှမဟုတျ ဘယျရီသီးရောငျက သငျ့ကိုခတျေဆနျဆနျ Look လေးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
သငျ့မှာ warm undertone ရှိပါက စပဈြသီးခွောကျရောငျ၊ ကွေးဝါရောငျ ဒါမှမဟုတျ အုတျကြိုးရောငျလေးကို ရှေးခယျြပါ။
သငျ့မကျြနှာကပြျေါမှုတညျပွီး ပါးနီကို ဘယျလိုလိမျးမလဲ?
circular motion အတိုငျး သငျ့ပါးမို့လေးတှပေျေါမှာ လိမျးပေးပါ။ အနားစှနျးလေးတှေ blend ဖွဈဖို့ သငျ့ရဲ့ဘရပျကို နားဘကျကို ဦးတညျပွီး တခကျြလောကျ ဆှဲပေးလိုကျပါ။
ဒိုငျးမှနျး ဒါမှမဟုတျ အသညျးပုံမကျြနှာပိုငျရှငျတှဟော ပါးရိုးတှကေို highlighting လုပျပေးခွငျးက မကျြနှာအသှငျအပွငျကို ပိုပွီးထငျရှားစပေါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပါးရိုးလေးအတိုငျး အထကျအောကျ C ပုံသဏ်ဍာနျ ခွယျသပေးပါ။
မကျြနှာဝိုငျးတဲ့သူတှဟော မကျြနှာလေးကို slimming ဖွဈပွီး သဘာဝပိုဆနျတဲ့ Look လေးခွယျသပေးရပါမယျ။ ပါးနီကို ပါးရိုးထိပျကနေ သဘာဝအကှေးအတိုငျးလိုကျပွီး ပါးရိုးအောကျသို့ ဆှဲပေးရပါမယျ။ သငျ့ရဲ့မကျြနှာအသှငျအပွငျကို ပိုပွီးပျေါလှငျစဖေို့ hairline နဲ့ နဖူးကို အရောငျလေးတှေ ထညျ့ပေးရပါမယျ။ ဒီလိုလုပျခွငျးက သငျ့မကျြနှာလေးကို သှယျလစြပေါလိမျ့မယျ။
ပါးနီမှာ ပေါငျဒါ၊ ခရမျ၊ ဂယျြလျ၊ stain ဆိုပွီး အမြိုးအစား ၄မြိုးရှိပါတယျ။ ပါးနီအမှုနျ့(ပေါငျဒါ)က အဆီပွနျတဲ့ အသားအရအေတှကျ သငျ့တျောပွီး ခရမျပုံစံပါးနီကတော့ အသားအရခွေောကျတဲ့သူတှအေတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။ ကိုရီးယားမလေးတှလေို ရှနျးစိုတောကျပတဲ့ ပါးမို့လေးဖွဈခငျြရငျတော့ hydrating formula နဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ ဂယျြလျပုံစံပါးနီလေးက သငျ့တျောပါတယျ။ စုပျတံနဲ့ stainပုံစံပါးနီကတော့ ပါးပျေါမှာ အစကျလေးခပြွီး လကျခြောငျးလေးနဲ့ ညှိပေးရမှာပါ။
Previous articleသွေးအိုင်ထဲက မိခင်ကို ပွေ့ဖက်နေတဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်မျောက်သားလေး(ရုပ်သံ)
Next articleရွှေလက်တွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမင်းသား DJ Push နဲ့ မင်းသမီး Jooy Warattaya
သဘာဝအတိုငျး ဆံပငျအရှညျမွနျစဖေို့အတှကျ မဖွဈမနေ လိုကျနာပေးသငျ့တဲ့ အခကျြမြား